अक्सफोर्ड उमाविको बसको ठक्करले अग्नि मृत्यु
काठमाडौँ, २२ फागुन । बालाजु चोकमा साँझ भएको दुर्घटनामा झापाका अग्नि ढुङ्गेलको मृत्यु भएको छ । नयाँ बजारस्थित अक्सफोर्ड उमाविको बा२क ४८० नं को बसले बा६१प ७३२७ नं को मोटरसाइकललाई
‘मलेसिया जाँदा दुःखका दिन सकिन्छन् कि भन्नुहुन्थ्यो तर त्यस्तो भएन’
राजु बिक्रम बस्नेत/रामेछाप । फागुन २२ – वैदेशिक रोजगारी बारे सूचना दिन गरिएको गन्धर्व गीत सुन्दा रामेछाप चुचुरेकी रविना थापाका आँखामा आँशु अडिएनन् । रामेछाप जिल्लामा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना अन्तर्गत
इजरायल जना चाहनु हुन्छ ? उसो भय यी कुरामा पास हुनु पर्छ,तपाई अनि मात्र जान सक्नु हुन्छ
काठमाडौं–इजरायल जाने तयारीमा रहेकी उदयपुर, गाइघाट–२ की मुना मगर नर्सिङमा स्नातक हुन् । केयर गिभरमा नेपाल सरकारले इजरायल पठाउने कार्यक्रमअन्तर्गत छानिएकी मगरका लागि नर्सिङमा स्नातक उत्तीर्णको प्रमाणपत्र मात्र पर्याप्त भएन।
सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षको अवसरमा प्रदर्शन, अध्यक्ष सहित ११ पक्राउ
काठमाडौं, २१ फागुन । सुगौली सन्धिको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ‘ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले गरेको आन्दोलनका क्रममा ११ जना नेता–कार्यकर्ताहरु प्रहरीले पक्राउ गरेको हो
म्यानपावर अनिश्चितकालागि बन्द गर्ने संघको घोषणा, ताहाचलमा श्रम प्रतिनिधिको भिड,मलेसिया कटौतीपछि यूरोपमा माग बढ्दै
काठमाडौ, २१ फागुन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले म्यानपावर व्यवसाय अनिश्चितकालीन म्यानपावर बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले शुक्रबार पत्रकारसम्मेन गरेर सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो
धरहरा ढल्यो, प्रेम अग्लियो
स्मृति बस्नेत “साथीहरूसँग फिल्म हेर्न जान्छु”, दिदीभिनाजुलाई रमिला श्रेष्ठले यसै भनेकी थिइन् । तर, उनको योजना सञ्जीव श्रेष्ठसँग भेट्ने र धरहरा चढ्ने थियो । १२ वैशाखको त्यो बिहान यी दुई
कुनै दिदि बहिनिले बिवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने विवाह अघि युवायुवतीले सोध्नै पर्ने केही सवाल
काठमाडौं । विवाह दुई व्यक्तिबीचको प्रेम, विश्वास र परस्पर तालमेलको सम्बन्ध हो । यस कारण विवाह अघि केही महत्वपूर्ण सवालका बारेमा जानकारी हुनु अति आवश्यक छ । तपाईको आफ्नो हुनेवाला
‘साँझविहान खान पाए म पनि स्कुल जान्थें’
स्कुलमा घण्टी बजेको आवाज सुनिनासाथ ११ वर्षीया मञ्जुले भाई र बहिनीलाई भनिन्, “ऐले स्कुल जाओ, दिउँसो गाउँबाट भात मागेर ल्याइदिम्ला ।” ९ वर्षीया सम्झना भोकै स्कुलतिर लागिन् । ६ वर्षीय
﻿ एसएलसीमा छ लाख विद्यार्थी सहभागी हुँने, १० जिल्लामा प्रश्नपत्र पठाउन बाँकी
भक्तपुर, २१ फागुन । प्रवेशिका अर्थात् एसएलसी परीक्षामा छ लाख १५ हजार विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक अनुपमचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार नियमित र एक्जाम्टेड गरी छ
किन गए नयाँ शक्तिमा ज्ञानेन्द्र शाह ? थपिएका ५६ जनाको (नामावलीसहित)
काठमाडौं, २१ फागुन । पुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिको अन्तिरिम केन्द्रिय परिषद् सदस्यमा ज्ञानेन्द्र शाह सहित ५६ जना थपिएका छन् । २४० सदस्यीय केन्द्रिय परिषदमा पुन ५६ जना